Kutumira Mota Kubva kuEU kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Mota zhinji dzatinonyoresa kubva kuEurope dzinoendeswa kuUK nevaridzi vadzo uye vatove pano, vachingoda kuitisa kunyoreswa kwekunze neDVLA. Isu tinogona zvakadaro kubata chiitiko chese chekutora mota yako kubva kune chero nhengo yenhengo yeEU kuenda kuUK.
Paunenge uchipinza mota kubva kuEurope kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose mutero pasina kupa mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani.
Isu tinofambisa maitiro ese aya panzvimbo yako, kunyangwe izvo zviri kubata nechikwata chevakadzikamisa chemugadziri wemotokari yako kana Dhipatimendi reZvekutakura, kuti iwe ugone kuzorora neruzivo rwekuti iwe uchanyoreswa zviri pamutemo neDVLA munguva pfupi kwazvo inogoneka.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuEurope kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira neawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rose.
Iyo yakarongedzwa, iri nyore maitiro akave akagadzirirwa pamusoro pemakore mazhinji, kupinza mota kubva kuEurope kuenda kuUK hakugone kuve nyore. Kuti umhanye pane zvaunoda uye uwane zvimwe, taura nesu nhasi pa +44 (0) 1332 81 0442.